कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) नियन्त्रण र रोकथाममा सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ ।
संयन्त्रहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालन नगर्ने र सामाजिक/भौतिक दूरी कायम गर्न लगाइएको लक-डाउन पनि निष्प्रभावी भएको अवस्थामा नेपालमा कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिन सक्ने सम्भावनाले आमनागरिक त्रस्त छन् ।
पछिल्लो समय देश पूरै खुला भएको छ । मुख्य शहरहरूमा भीडभाड बढेका छन् र संक्रमणको दैनिक गति उकालो लागिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्य आफूले बहन गर्नुपर्ने दायित्वमा कहाँनेर चुक्यो ? यो प्रसंगमा लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले जनस्वास्थ्यविज्ञ डाक्टर समीरमणि दीक्षितसँग कुराकानी गरेका छन् ।
प्रस्तुत छ डा. दीक्षितसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश -
संक्रमण नियन्त्रण र रोकथाममा राज्य कसरी र कहाँ चुकिरहेको छ ?
यो चुक्यो भन्ने शब्द अलि कस्तो–कस्तो लाग्यो । तर राज्य चाहिँ परीक्षणमा चुकेको छ नि ! परीक्षण भनेको देशभरिका लागि हो । जस्तो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा चुकेको हो ।
काठमाडौंको कुरा गर्ने हो भने राज्य चुकेको होइन, राज्यका तर्फबाट कमजोरी भएको हो । लक-डाउनलाई पहिला चाहिनेभन्दा बढ्ता महत्त्व दिइयो ।
हामीले ५/६ हप्ता लक-डाउन गरेपछि खुकुलो गर्दै जान थाल्नुपर्थ्यो के ।
अब समस्या आउँदैन भनेर राज्यले कसरी सुनिश्चित गर्ने ? हामीले धेरैपटक खबरदारी गर्‍यौं । करायौं । राज्यले वास्ता नै गरेन, त्यहाँ कमजोरी देखियो । जब मान्छेलाई असह्य भयो र आन्दोलन गर्न थाले अनि सरकार आत्तियो ।
अब मान्छेहरू नियन्त्रणबाहिर जान थाले भनेर राज्य तर्सियो । मान्छेहरूको विरोधका कारण लक-डाउन खुकुलो पारेको देखाउनुभन्दा त आफैंले गरेको हो भनेर देखाउन राज्य लाग्यो ।
आन्दोलन नभएको भए अझै कडीकडाउ हुन्थ्यो ?
७/८ हप्ता एकदम कडिकडाउ गर्ने अनि अकस्मात पूरै खोल्दिने ? अहिले खुकुलो पारेको भन्न मिल्दैन । पूरै खुला गरेको जस्तो छ । स्कूल, पब्लिक भेहिकल, पार्टी प्यालेस, सिनेमा खेलकूद र हवाईजहाजबाहेक सबै खुला गरिदिएको छ । जोरबिजोर पनि खासै चलिरहेको छैन ।
राज्यको चरम गैरजिम्मेवारी कहाँनेर देखियो भन्दा चरणबद्ध खुकुलो पार्नुपर्नेमा उनीहरूले आँखा चिम्लिदिए । पहिला बढी कडा गरे अहिले बढ्ता खुला गरिदिए । हुँदाहुँदा मास्क नलगाई हिँड्ने मान्छेलाई कारवाही गर्न सक्नुपर्ने हो त्यो पनि छैन ।
मास्क लगाउन प्रोत्साहित गर्ने, नलगाउनेलाई केही कारवाही गर्ने काम त गर्न सक्छ नि सरकारले । त्यो पनि गरिरहेको छैन । तरकारी बजारमा दूरी मेन्टेन भएको छैन । अस्तिसम्म सडकमा आएका बूढापाकालाई त लठ्ठी हान्न सक्ने सरकारले अहिले मास्क नलगाई हिँड्नेलाई केही कारवाही गर्न सक्दैन ?
कडिकडाउ गर्न किन सकिँदैन ? मान्छेले कपडाकै भएपनि मास्क लगाएर हिँड्छ नि !
अस्तिसम्म पसल बन्द गराउँदै हिँड्ने त्यही सुरक्षाकर्मी सडकमा छन् । उनीहरूले मान्छेलाई सचेत बनाउन त सक्छन् नि ! गाह्रो छैन । राज्यले यहीँनेर चरम लापरवाही गरिरहेको छ । जानीजानी गरेको हो कि जस्तो लाग्छ कताकता ।
संक्रमण बढिरहेको छ, तर गतिविधि पूरै खोलिदिएर सरकारले उल्टो दिशा समातेको हो ?
चरणबद्ध रूपमा खुकुलो गर्दै जाँदा केही फरक पर्दैन ।
संक्रमण भनेको के हो भने एउटा समयमा बढ्दै जान्छ, अर्को समयमा कम हुन्छ ।
असारको अन्त्यतिर उत्कर्षमा पुगेर झर्न सक्छ भन्ने मेरो आंकलन छ । यसलाई बढ्ने क्रममा खुकुलो पार्&zwj;यो, घट्ने क्रममा टाइट बनायो भन्न मिल्दैन ।
अमेरिकामा हेर्ने हो भनेपनि उनीहरूको घट्ने क्रममा त छ तर संख्या नेपालको भन्दा कति हो कति धेरै छ नि । त्यो बढ्ने घट्नेसँग जोडिएकै छैन । मुख्य कुरा मास्क लगाएर दूरी मेन्टेन गर्ने हो भने संक्रमण बढ्ने गति आफैं कम भइहाल्छ । चाहिनेभन्दा बढी बढ्न दिँदैन ।
हाम्रोमा संक्रमण उत्कर्षमा पुगेको कसरी थाहा पाउने ?
परीक्षण नभएकाले हाम्रोमा कहिले बढ्यो र कहिले घट्यो भन्ने यथार्थ जानकारी नै छैन । बढेर उच्च तहमा पुगेपछि तल झर्दै पो छ कि ? के थाहा ?
अहिले परीक्षणको दायरा मात्र बढेको हो कि ? हामीलाई थाहा नै छैन । राज्यले अहिले पछिल्लो समयमा ५/६ हजार परीक्षण कनीकनी गरिरहेको छ, सबै विदेशबाट आएकाहरूलाई मात्र गरेको हो । यहीँका मान्छेहरूलाई गर्ने हो भने यो भन्दा ठूलो संख्यामा संक्रमण देखिएको हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीको कुरा मलाई गर्नै मन छैन । अस्ति विज्ञहरूको छलफलमा मैले कोरोनाभाइरसमा बोसीय र फ्याटीय तत्व हुँदैन, प्रोटिनको लेयर हुन्छ भनेर भनेको थिएँ । उहाँले मलाई नै टार्गेट गरेर मैले यस्तो भन्न खोजेको होइन, यस्तो भन्न खोजेको हो भनेर उल्टै १० मिनेट समय बिताइदिनु भयो । उहाँलाई कति सुझाव दिनु के ? मान्ने भए पो !
काठमाडौंमा पनि २/४ जना दैनिक संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, संक्रमित नै नभएका हुन् कि परीक्षण नभएको हो ?
त्यो त स्वाभाविक हो । काठमाडौं मात्र भनेर हुँदैन । काठमाडौंमा पनि दैनिक सयौं अझ भनौं हजारौं बाहिरबाट आइरहेका छन् । त्यहाँ पनि राज्यकै दोष छ । परीक्षण गर्ने हो भने काठमाडौंमा पनि धेरैमा संक्रमण भेटिन सक्छ ।
काठमाडौं २ पटक तर्स्यो, एउटा पहिलो केस भेटिँदा तर्स्यो, त्यसपछि सनसिटी अपार्टमेन्टमा देखिएपछि तर्स्यो । अहिले त तर्सिनै छाडेको छ । देशभरि ८ हजारमाथि संक्रमण देखिइसकेको छ । यो अझ बढ्छ भनेर हामीले पनि भनिरहेका छौं । तर मुलुकभित्र भयावह नै छ भन्ने स्थिति अहिले पनि छैन ।
परीक्षण नगरेको हुनाले यो समाजमा के भइरहेको छ भन्ने थाहा छैन । बाहिरबाट आउनेहरूको मात्र परीक्षण गरिरहेका छौं । अहिले पनि ४० हजार स्वाब टेस्टका लागि होल्ड भइरहेको अवस्था छ ।
जति धेरै स्वाब टेस्ट गरिन्छ त्यति धेरै केसहरू देखिन्छ अब केही हप्तासम्म । त्यसपछि बल्ल समाजमा जाने हो । त्यतिबेलासम्म उत्कर्ष बिन्दु पार गरिसकेको पनि हुन सक्छ । समाजमा कतिपय त संक्रमण लागेर निको भएर पनि बसिसकेका छन् ।
एकले अर्कोलाई संक्रमण गराउने दर नेपालको हकमा कमजोर नै देखिएको हो त ?
यसको बारेमा अहिल्यै केही भन्न सकिन्न । जस्तै काठमाडौंमा दिनको १५ हजार जति टेस्ट गरौं न, त्यसबाट ५ प्रतिशतसम्म संक्रमण देखिन सक्ने मेरो आंकलन छ । परीक्षण नै नभएको अवस्थामा एकले अर्कोलाई संक्रमण गराउने दर कम या बढी छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?
तराईबाट आउने, भारतबाट आउनेहरू काठमाडौंमा धेरै नै आइसकेको छ । तराईबासी मात्र होइन, काठमाडौंबाट नै घुम्न गएर फर्केर आउनेहरूको संख्या कति धेरै छ ? परीक्षण नभएर हो थाहा नभएको । 'नो न्यूज इज गुड न्यूज' भन्या जस्तो हो ।
संक्रमितको यकिन तथ्यांक नै थाहा नभएको अवस्थामा संक्रमित नभएको जस्तो देखिएको मात्र हो ।
यसमा पनि राज्यकै गैरजिम्मेवारी मुख्य कारण हो ?
जिम्मेवारीको त कुरै नगरौं । आजको दिनसम्म हामीले दैनिक ६ हजारको हाराहारीमा टेस्ट गरिरहेका छौं । प्राइभेट सेक्टरलाई परीक्षण गर्न दिइएको छैन हल्लाखल्ला जति गरेपनि । बरू आफ्नो ल्याबहरू बढाउँदै बसिरहेका छन्, पैसा खानका लागि ।
दिनको १५ हजार जति परीक्षण गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । यसमा गैर-जिम्मेवारी मात्र होइन चरम लापरवाही देखिएको छ ।
निजीलाई दिने कुरा भएको थियो, अस्ति मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको होइन र ?
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्‍यो, प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरे । प्रवक्ताले बोले । तर खोइ त ? अंग्रेजीमा एउटा उखान छ, 'प्रुफ अफ द पुडिङ इज इन् द इटिङ' । खीर बनायो भने खीर मीठो छ कि छैन भनेर आकलन गरेर हुँदैन, खानै पर्छ ।
हामीले खीर यति मिठो बनाएका छौं, यस्तो छ भनेर के गर्नु ? खाएको छैन । हामीले यस्तो प्लान गरेका छौं भनेर के गर्नु ? त्यसलाई कार्यान्वयन नै गरिएको छैन । खीरकै उखान जस्तो त हो यो भनेको पनि ।
एक महिनापछि काठमाडौंको स्थिति के होला ?
काठमाडौँमा पनि संक्रमणको पनि संख्या बढ्छ । मृत्युदर पनि बढ्छ । अब आएर नियन्त्रणबाहिर नै जाला जस्तो त मलाई लाग्दैन । जे हुनु भइसक्यो । चौथो महिना पुगिसक्यो । संसारभरको तथ्यांक हेर्ने हो भने चौथो महिनामा गएर घट्न थालिसकेको छ ।
संक्रमण बढ्ला काठमाडौंमा । संसारको तथ्यांकलाई हेरेर नेपाल सरकारले गाइडलाइन पनि ल्याउन खोजिरहेको थियो । त्यहाँ त एक-डेढ महिनामा त करीब ४ लाख संक्रमित हुन सक्ने र २० हजारको मृत्यु हुन सक्छ भनेको थियो । २० हजार मान्छे मर्छ भन्नु जोक हो ? हजार गुणा नै मिलेन अहिलेको तथ्यांक हेर्दा । २२ जनाको मात्र मृत्यु भएको छ अहिलेसम्म ।
२२ जना पनि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको होइन भन्छन् प्रधानमन्त्रीले, खास कसरी मृत्यु भएको रहेछ ?
कोरोनाले कसलाई मार्छ र ? कोरोनाले आम मान्छेलाई केही गर्दा पनि गर्दैन । रुघाखोकीले भन्दा पनि कम असर गर्छ । रुघाखोकीले ज्वरोस्वरो गराएर मान्छेलाई थला पार्छ । यसले त आम नागरिकलाई थला पनि पार्दैन भनेको । यो केही पनि होइन ।
तर डरलाग्दो कहाँनेर छ भने यसले उमेर भएकाहरूमाथि ठूलो हमला गर्न सक्छ । उमेर भएका र दीर्घरोगीहरूलाई यसले छाड्दैन । प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा त्यहाँनेर मिल्छ । उहाँले दीर्घरोगी भन्न खोजेको हो । नियमानुसार दीर्घरोगीलाई कोरोना नलागेको भए छिटै मृत्यु नहुन सक्थ्यो ।
कोरोनाका सन्दर्भमा हेल्थ प्रोटोकलहरू अद्यावधिक नभएका हुन् हाम्रोमा ?
परीक्षणमा त नयाँ गाइडलाइन ल्याएर झन् गडबड गर्न खोजेको छ सरकारले । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार भनेर ल्याइएको गाइडलाइन झन् गलत भइदियो । क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई परीक्षण नै नगरी घर जान दिने भन्नु त डरलाग्दो कुरा हो ।
त्यो भइरहेको छ र त्यसैले समाजमा संक्रमण बढ्ने खतरा देखिरहेको छु मैले । तर अरु गाइडलाइन के गरेको छ त्यो त हेर्नुपर्ला । अहिले भन्न सम्भव नहोला । तर परीक्षणको गाइडलाइन चाहिँ गलत छ ।
प्रधानमन्त्रीले अब केही गर्न सकिन्न भनेर हार मानेपछि बेसार खाऊ, हाच्छियुँ गर भन्न थालेका हुन् ?
प्रधानमन्त्रीको कुरा मलाई गर्नै मन छैन । अस्ति विज्ञहरूको छलफलमा मैले कोरोनाभाइरसमा बोसीय र फ्याटीय तत्व हुँदैन, प्रोटिनको लेयर हुन्छ भनेर भनेको थिएँ । उहाँले मलाई नै टार्गेट गरेर मैले यस्तो भन्न खोजेको होइन, यस्तो भन्न खोजेको हो भनेर उल्टै १० मिनेट समय बिताइदिनु भयो ।
उहाँलाई कति सुझाव दिनु के ? मान्ने भए पो ! आफैं जान्नेसुन्ने बन्न खोज्नुहुन्छ । मुख्य कुरा उहाँलाई सल्लाह सुझाव दिने नजिकका प्रियपात्रहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो । यो पहिलोपटक होइन, पटक-पटक यस्तै कुराहरू दोहोर्&zwj;याइरहनु भएको छ ।
विज्ञान भनेको ढिपी कस्ने विषय होइन । यो अंकमा जाने कुरा हो । अंक र तथ्य हो । उहाँले न अंक मान्नुहुन्छ न तथ्य मान्नुहुन्छ । विज्ञानको धज्जी उडाउनु भएको छ । उहाँको बारेमा त्यही भएर बोल्न मन लाग्दैन मलाई ।
संक्रमणको नियन्त्रण आम नागरिकको पनि भूमिका हुन्छ होला नि ?
एउटा कुरा काठमाडौं लगायतका ठाउँमा राज्यले मास्क लगाउन, दूरी कायम गर्न कडिकडाउ गर्नुपर्छ । हामी नागरिकले पनि राज्यलाई नकुरौं के । पसलेले पनि मास्क नलगाइकन कोही किनमेल गर्न आउँछ भने त्यसलाई सामान नबेचौं ।
ट्याक्सी त बाध्यता हो । ट्याक्सीमा पनि एक जनाभन्दा बढी बसेको छ भने कारवाही गरौं । भीडभाड हुन बिल्कुलै दिनु भएन । मास्क नलगाएकालाई जरिवाना गर्नुपर्‍यो ।
सरकारविरुद्ध बाहिर प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्, यसको जोखिम कसरी मूल्यांकन गर्ने ?
यस्तो बेलामा सडक आन्दोलन भनेको चरम मूर्खता र गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम हो । उनीहरूले राखेको मागमा मेरो केही भन्नु छैन । लोकतन्त्र हो, संविधानले नै माग राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । तर जुन किसिमले प्रदर्शन भइरहेको छ, त्यो चरम मूर्खता हो ।